घाइते प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गर्ने शर्मा मन्त्री बन्दै ! कसले गर्‍यो सिफारिस ? — Sanchar Kendra
घाइते प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गर्ने शर्मा मन्त्री बन्दै ! कसले गर्‍यो सिफारिस ?
शर्माका साथै प्रदेश २ मा राजपाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा सुरेश मण्डल र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीमा डिम्पल झालाई पठाउने निर्णय गरेको छ । झा, राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाकी पत्नी हुन् ।बाटोमै रोकी एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गर्ने काममा शर्माको संलग्ना पुष्टि भएको भन्दै अदालतले उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो । कान्तिपुरमा खबर छ ।
२०७५ साउन ८ मा प्रकाशित ।